HADDII, inta lagu guda jiro, iyo ka dib muuqaal kasta oo muuqda oo jir ahaaneed waxaa jira jawi. Laga soo bilaabo dhalashada oo ciid ah dhulka, laga bilaabo lichen ilaa geedkii weyn, dhirta xoolaha ka soo jeeda dadka, jidh kasta oo jirka ah wuxuu ku jiraa jiritaanka cimiladeeda gaarka ah, wuxuu ilaaliyaa dhismihiisa dhexdiisa waxaana ugu dambeyntii lagu kala dirayaa jawigeeda.
Ereyga waxaa laga soo qaatay Giriigga, Atmos, macnaha ereyga, iyo sphaira, sphere. Waa erey loo isticmaalo in lagu magacaabo hawada ku hareeraysan dhulka iyo marxaladda hareeraha ama saameyn, bulsho ahaan ama anshax, taas oo jawigu yahay erey kale. Macnahan waxaa lagu daray eraygan sida halkan loo isticmaalo, laakiin waxaa intaa dheer halkan waxaa ku yaal muhiimada qoto dheer iyo codsiyo kala duwan. Marka lagu daro soo-saaridda jidheed ee xadidan, jawiga waa in la ogaadaa in uu leeyahay saameyn jidh ahaaneed oo uu isticmaalo, waana in la fahamsan yahay in ay jirto jawi nafsi ah, jawi nafsi ah iyo jawi ruuxi ah.
Jeermiska dhammaan waxyaabaha nool waxaa lagu qabtaa duritaanka jawiga ka hor intaanay jiri jirin biyo ama dhulka. Nolosha lagama maarmaanka u ah dhammaan waxyaabaha jireed waxay ka yimaadaan oo u wareegaan hawada. Maaddadu waxay siisaa nolosha qaababka dhulka iyo dhulka laftiisa. Maaddadu waxay siisaa nolosha badda, harooyinka, webiyada iyo dabaylaha. Laga soo bilaabo cimiladu waxay ka timaaddaa nolosha taageerta kaymaha, dhirta, iyo xayawaanka, iyo ragga naftooda ka soo jeeda jawiga. Maaddadu waxay soo baxaysaa oo waxay ku wareejisaa iftiinka iyo dhawaaqa, kuleylka iyo qabowga, iyo cadarka dhulka. Waxaa ku dhex jira dabaylaha, roobabku way dhacaan, daruuraha ayaa la sameeyaa, iftiin shidaal ah, duufaantu way qulqulayaan, midabada muuqata, iyo waxa ku jira dhammaanba dabeecadda dabiiciga ah. Xerada dhexdeeda waxaa jira nolol iyo geeri.
Shay kasta wuxuu ku jiraa jawigeeda. Xerada dhexdeeda dabeecadda asalka ah ee shay kasta ayaa dhacaya. Ka jooji ama shey shayga ka soo jeeda jawiga iyo nolosheeda ayaa ka tegi doonta, qaabkeedu wuu burburin doonaa, qaybaheeduna kala soocayaan, jiritaankuna wuu istaagi doonaa. Haddii jawiga dhulku ka baxo dhulka, dhirta iyo geedaha way dhimanayaan mana awoodi karaan inay cunaan cunto, biyo ma fiicna in la cabbo, xayawaanka iyo ragguba ma awoodaan inay neefsadaan oo ay dhintaan.
Maaddaama ay jirto jawi dhul, oo dhulku uu neefsanayo oo nool yahay, wuxuu qaabeynayaa qaabkiisa oo uu leeyahay jiritaanka, sidaas awgeed waxaa jira jawi, taas oo ah ilmo, nin dhashay, oo uu korayo oo uu sii wato . Dabeecaddiisu waa waxa ugu horreeya ee uu qaato, waana waxa ugu danbeeya, sida muuqaal ahaan jir ahaaneed, ayuu ka bixiyaa. Muuqaalka dadka ma aha tiro aan xad lahayn oo aan la hubin, waxa uu leeyahay qeexitaan cad iyo tayada. Waxaa laga yaabaa in la dareemo dareenka oo loo yaqaan maskaxda. Muuqaalka dadka maahan mid la mid ah qoyaanka qoyan ee qiiqa ama uumiga. Qodobbada looyaqaano ee ah in ay sameeyaan nin, waxay leeyihiin xudduudkooda gaarka ah waxayna isku xiran yihiin isku-xidhnaanta cad, qaab gaar ah iyo sida waafaqsan sharciga.
Nooca jirka ah ee cimiladiisa waa sida fetus oo ku dheggan amnion iyo chlorion geeddi-socodka horumarinta gudaha jawiga weyn, ilmo-galeenka. Qiyaastii saddex meelood oo nafaqo ah oo uu jidhkiisa la joogteeyo waxaa lagu qaadaa neefsashadiisa. Neefkiisu ma aha kaliya tiro gaas ah oo qulqulaya sambabada. Neeftu waa jaan toos ah oo ay ka mid tahay jidhka jirka oo laga helo jirdhiska jirka iyo kuwa maskaxda, iyada oo uurjiifku uu ka kaco dhiigga illaa ilma-galeenka iyo mandheerta iyada oo loo marayo xarig xuddunta ah.
Muuqaalka jidh ahaaneed ee dadka ayaa ka kooban unugyo aan muuqan oo aan muuqan oo aan la arki karin oo laga saaro jidhka jirka iyada oo la adeegsanayo neefta iyo adigoo u maraya indhaha maqaarka. Qaybaha jireed ee laga qaado neefta waxay gashaa iskudhaf kuwa jidhka ka jira waxayna joogteeyaan qaabdhismeedka. Qaybahaan jirka ah waxaa lagu keydiyaa neefta. Waxay ku wareegsan yihiin nafta jireed oo sidaas darteed samee jawiga jireed. Muuqaalka jireed wuxuu u nugul yahay urka iyo fooxa wuxuuna soo saaraa ur ah, kaas oo ah dabeecada iyo tayada jirka jirka.
Haddii qofku arki karo jawiga jireed ee nin wuxuu u muuqanayaa sida qaybo aan la tirin karin oo qol ka mid ah oo laga sameeyay muuqaal ay ka muuqato iftiinka qoraxda. Kuwaas waxaa loo arki doonaa in ay socdaan ama daadsan yihiin jirka, dhammaantood waxaa lagu hayaa dhaqdhaqaaqa neefta. Waxay u muuqan lahaayeen inay soo riixaan, goobaabaan oo ku soo noqdaan jidhkiisa, raacaan meel kasta oo ay tagto oo saamaynayso qaybta kale ee jimicsiga jirka ah ee lala xidhiidhayo, iyada oo la eegayo awoodeeda iyo u nugulaanta jawiga jireed kaas oo la xariira . Waxay ku xiran tahay xiriirka ama isku-darka of jimicsiga jireed in cudurrada faafa ay ku faafaan iyo caabuqyada jireed oo la soo gudbiyey. Laakiin jirka qofka jirkiisa ayaa laga yaabaa in laga yaabo inuu ka fogaado faafinta jireed isagoo ku haynaya gudaha iyo dibadda, isagoo diidaya cabsida, iyo kalsoonidii qof caafimaadkiisa iyo awooda caabiga.
Xaaladda maskaxeed ee qofka ayaa soo jiidaneysa oo ku hareereysan jawigiisa jireed. Xaaladda maskaxdu way ka xoog badan tahay kana xoog badan tahay saamayntiisa iyo saameynta jidhkeeda. Ninka maskaxda ah weli lama sameynin, laakiin waxa uu wakiil ka yahay qaab jidheedka muuqaalka jidhka ee jirka. Iyada oo jirka jireed astaan ​​u ah xarunta, dabeecadda maskaxdu waxay ku wareegsan tahay iyada oo jirkeeduna yahay mid maskax ahaan u dhexeeysa xoogiisa. Waxay ahayd in loo arko inay u muuqan doonto mid uumi ah ama biyo. Jawiga jireed wuxuu u muuqanayaa inuu yahay mid ka mid ah qayb ama tuubbo biyo ah. Muuqaalka maskaxda ee nin waxaa laga yaabaa inuu la mid yahay baddaha guud, iyada oo kulaylka iyo qaboobaha, hirarkiisa iyo dhaqdhaqaaqyada casriga ah, duufaanka iyo eddiyada, boodhka iyo waxqabadka, iyo kor u kaca iyo dhacdooyinka ay ka imanayaan. Xaaladda maskaxeed ee dadka ayaa mar walba garaacaysa jidhka jirka oo leh jirdhigeed dabiiciga ah, sida badweynta u garaaca xeebta. Madaastada maskaxdu waxay kor u kacdaa jirka iyo jidhka jidhkiisa iyo jidhkiisa, oo ah jirdhiska jirka. Dareenka, rabitaanada iyo jacaylku wuxuu u dhaqmaa jawiga nafsiga ah sida kor u kaca iyo hoos u dhaca boodhka, ama sida xumbada iyo xoqidda biyaha iyo qashinka biyaha oo ka soo horjeeda cayayaanka, ama sida hawlgal ama jimicsi isku dayaya in ay sawiraan dhammaan walxaha dhexdiisa , naftiisa. Sida baddaha, jawiga nafsigu waa mid aan xasillooneyn oo aan waligeed ku qanacsanayn. Xaaladda maskaxdu way isku kalsooni tahay waxayna saameysaa dadka kale. Sida ay ku dhacdo ama ka timaaddo ama daadad ahaan jirka jirdhiska, dhamaan noocyada dareemada ama dareenka ayaa la soo saaraa oo ficilkani gaar ahaan dareenka taabashada, taabashada gudaha. Tani waxay caqabad ku tahay inay dibadda u baxdo ficil ahaan, waxayna dareensiisaa sida kor u kaca bacda oo ku dhajisa shaybaarkeeda, ama waxay keenaysaa wax dareen ah shayada qaar oo soo saarta dareemo sida maskax xoog leh.
Isku dhex mara jirka jireed iyo agagaarka jireed, jawiga maskaxdu waxa uu leeyahay mid ka mid ah waxyaalahiisa oo saameeya saamaynta macnaha leh ee loo yaqaan "magnetism shakhsi ahaaneed. Waa mid caan ku ah dabeecadeeda waxaana laga yaabaa inay soo jiidasho xoog leh u leedahay dadka kale. Xaaladda maskaxdu waxay saamaysaa dadka kale ee uu la soo xiriiro, iyada oo loo eegayo awoodeeda ama magnetismka shakhsi ahaaneed iyo sida ay ugu nugul yihiin ragga kale, iyada oo loo marayo jimicsiga maskaxeed. Muuqaalkan maskaxeed ee qof ka mid ah ayaa kor u qaadaya jawiga maskaxda ee qof kale ama kuwo badan oo ka mid ah falalka jidhka ama jirka; iyo xubnaha jidhka way ka caroodaan sida dabiiciga ah ee rabitaanka ama dareenka ama jaceylka taas oo ah mid madax banaan. Tan waxaa laga yaabaa in lagu sameeyo hal mar oo keliya, iyada oo aan la isticmaalin ereyo ama ficil nooc kasta. Sidaa darteed qaar baa dareemaya in ay sameeyaan ama yiraahdaan wax ama sheegaan dareennada qaarkood, kuwaas oo aan iyagu lahayn haddii aysan saameyn ku yeelanayn jawiga maskaxeed ama shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed ee ka soo horjeeda ama soo jiidaya. Qofka arkaya in jawiga maskaxdiisa uu saameyn ku yeesho wax kale oo uu ka ogyahay inuu ugu fiican yahay, ama uu dareemayo in uu si xun u saameynayo, wuxuu hubin karaa ficilka ama bedelka saameynta isagoo aan waxba ka qabanayn dareenka ama dareenka dareemay, iyo bedelida fikirkiisa mawduuca dabeecad kale iyo adoo haysta fekerkiisa si joogto ah maadadaas. Dhammaan dareenka iyo dareenka nooc kasta oo la soo saaro iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah jawiga nafsadeed iyo midka maskaxda ee dadka kale. Muuqaalka maskaxeed ee dadka qaarkiis ayaa saameyn ku leh kicinta, xiisaha, iyo xiisaha kuwa ay la soo xiriiraan. Tani waxay noqon kartaa dabeecad farxad leh. Qaarkood waxay leeyihiin saameyn soocid ah oo lagu maareeyo ama dhimayo kuwa ay la kulmayaan, ama u keenaya inay danahooda ku dhuuntaan.
Madaqada maskaxdu waa dhexdhexaadinta maskaxduna ay jidhka jidhkeeda u dhaqmeyso iyada oo loo marayo jidhkeeda muuqaalkeeda, waana mid dhexdhexaad ah oo dhammaan dareemada iyo dareenka la dareemo maskaxda. Maqnaanshaha maskaxiyan, maskaxda nin ee horumarkiisa horumarkiisu ma awoodi karo inuu ka warqabo ama la xiriiro oo uu u dhaqmo jidhkiisa ama jirkiisa jirka.
Xaaladda hadda jirta ee horumarinta aadanaha aadanuhu ma laha jirid maskaxeed oo si fiican u qeexan inta uu noolyahay jirkiisa. Laakiin waxaa jira jawi maskaxeed oo qarsoodi ah oo hareereysan oo u dhaqdhaqaaqa iyo jawiga maskaxeed, iyo marka laga reebo jidhka jirka oo loo maro neefta iyo iyadoo la adeegsanayo xarumaha dareemayaasha jirka. Cimilada maskaxdu waxay u egtahay sida korontada ama korontada, sida farqiga tayada qotomiska ee maskaxda maskaxda. Waxay la xiriirtaa jawiga nafsiga ah iyadoo korontadu ay tahay aag magnet ah. Xaaladda maskaxdu waxay soo jiidataa jawiga maskaxeed iyo iyadoo la adeegsanayo ficilka jawiga maskaxda oo ku yimaada jawiga maskaxda oo dhan dhammaan dhacdooyinka maskaxda iyo muuqaalka iyo muuqaalka la soo saaro ama la keeno.
Miyirku wuxuu u wareegayaa jawiga maskaxeed mana dareemayo, mana ku xirnayn wax kasta oo dareen ah. Kaliya marka ay ku dhacdo iyada oo la xidhiidha jawiga maskaxda iyo jidhka jirka ayaa ah mid u nugul oo dareemaya dareemid. Maskaxda ku jirta jawiga maskaxeed waxay ku dhaqmaysaa feker ahaan. Maskaxda ku shaqeysata jawiga maskaxeed iyo marka ay ku hawlan tahay fekerka isdaba-joogga ah ee ka baxsan dareenka.
Kaliya marka fikradda la dhajiyo jawiga maskaxeed iyo ku xirnaanta dareenka ayaa dareemaya khibrad maskaxeed.
Xaaladda maskaxdu waa mid sida ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka sida hawadu muhiim ugu tahay dhulka iyo biyaha iyo nolosha dhirta iyo xayawaanka. Haddii aysan jirin maskaxda maskaxda, bani-aadmigu weli wuu noolaan karaa, laakiin wuxuu noqon lahaa xayawaan kaliya, niyadjab, ama caato. Sababtoo ah jawiga maskaxda ee ah in ninku yahay muuqaalka qofka oo u muuqda inuu yahay mid ka badan xayawaan. Nabadgelyada maskaxeed kaligeed looma hayo dareen iyo niyad xumo. Waxaa lagu dhaqmaa oo ku hareeraysan rabitaan, mana aha mid aan dhib u keenin fikrad kasta oo akhlaaqeed ama xaq iyo khaldan. Marka jawiga maskaxdu la xidhiidho iyo falalka la xidhiidha jawiga maskaxeed, dareenka dareenka ayaa la toosi karaa; fikradda saxda ah ee khaldan ayaa la tixgeliyaa, marka, marka ficilka la tixgelinayo uu yahay mid lid ku ah dareenka dareenka, laakinse maskaxdiisa fekerka ah, Maya. Haddii fekerka maskaxeed maskaxeed ay uga jawaabaan No, maskaxeed maskaxdu hoos u dhigto, jawi nafsi ah, iyo ficilka ficilka ah ee loo maleynayo lama ogola. Laakiin marka rabitaanku ka xoog badan yahay fikradda saxda ah, jawiga nafsiyadeed ayaa xirmi doona waqtiga cimilada maskaxeed iyo rabitaankana waa la ficilaa marka xaaladaha iyo xaaladaha ay oggolaadaan.
Xaaladda maskaxeed ee qofku wuxuu u saameeyaa dadka kale hab ka duwan midka maskaxeedkiisa. Jiritaanka maskaxeed wuxuu saameeyaa shucuurta kale, iyo rabitaanku waa arrin firfircoon oo dareen ah natiijada; halka jawiga maskaxdu uu saameyn ku yeesho dadka kale hababka maskaxda. Fikradaha waa arimaha ay ka mid yihiin hababka maskaxeed ee lagu qaado. Hawlaha maskaxiyan maskaxeed waa mid cajiib ah waxayna dhalinaysaa dareen. Kuwa ka mid ah jawiga maskaxdu waa caqli-gal, waxayna dhalisay fikrad. Tallaabooyinka maskaxda ee maskaxiyan maskaxeed waa anshax, iyo marka maskaxiyan uu ku dhaco maskaxda natiijada waa anshax.
Madaxbannaanida jidhka iyo jawiga nafsiga ah iyo jawiga maskaxeed ee ragga ama dadka kale, jawiga maskaxdiisa ayaa soo jiidanaya, kiciyaa oo dhiirigeliya dadka kale inay u fekeraan una soo jeediyaan maadooyinka fikradda, ama haddii kale ay saameyn ku yeelato dulqaadaha, dulqaadka , daroogada iyo bur burinta hawlaha maskaxeed. Tani mar walba looma sameeyo ujeedo. Midka saameeya dadka kale ayaa laga yaabaa inaysan ogeyn saamaynta; Saameynahan waxaa la soo saaray ama aan lahayn himiladiisa iyadoo la eegayo awooda fikirkiisa iyo u nugulaanta dadka kale ee maskaxda ku hayaan. Kuwa isku midka ah, ama ku dhawaad ​​isku midka ah, jimicsiga maskaxeed oo wanaagsan ayaa u muuqda in ay ka horjoogsanayaan oo is hortaagayaan haddii midkoodna ay kala duwan yihiin. Muwaadiniinta noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay soo jiito oo soo saaraan ama awooda inay ku fekeraan, waxayna xoojin karaan jawiga maskaxda midkood ama labadaba, haddii aysan soo saarin saameynta ay ka soo horjeedo ee xad gudubka iyo jahawareerka.
Xaaladda maskaxdu waa dhexdhexaadiyaha u dhexeeya nin xayawaan ah oo leh dabeecad maskaxeed, iyo shakhsiyadda ama ruuxa ruuxiga ah. Iyada oo la adeegsanayo jawiga maskaxda iyo fikradaha ka shaqeynaya, rabitaanka xoogga ah ee jawigaan maskaxeed oo qallafsan ayaa laga yaabaa in la xakameeyo lana xakameeyo, ninkii jir ahaaneedna wuxuu sameeyey qalab fiican oo uu rabo si macquul ah loo shaqeeyo, maskax ahaan loo tababaray oo si buuxda u bartay nafteeda iyo shaqadeeda adduunka oo joogto ah iyo dhimashadiisii ​​joogtada ah ee miyir la'aanta ah.
Si ka duwan dadka ragga iyo maskaxda ee maskaxda iyo jimicsiga jidhkooda, nin ruuxi ah ee jawiga ruuxi ah wuxuu leeyahay joogto ah. Waxaa sabab u ah xaqiiqda iyo joogtada ah ee dabiiciga ah ee ruuxa ruuxiga ah ee maskaxda maskaxda lagu hayo, jawiga nafsiga ah ee soo saarey iyo jir ahaaneed loogu yeero jiritaanka, mid kasta oo gudaha ah iyo kan kale, iyo jir iyo maskax iyo maskax Atmospheres ayaa loo qaabeeyey ka dib markii waxoogaa ka duwan jawiga ruuxiga ah.
In maskaxdu ay u malaynayso inay tahay mawduuc maskaxeed, jawiga ruuxiga ah ee qofka waxaa laga yaabaa in la barbardhigo iftiin aan midab lahayn oo ah iftiin aan hoos lahayn iyo nin ruuxi ah oo u ekaado wixii uu ka bartay iyo iftiinka. Marka la eego xiriirka iyo saamiga, mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in uu tixgeliyo jawiga maskaxda sida qeybta hoose ee ruuxa, maskaxda ee maskaxda, jir ahaaneed gudaha jimicsiga maskaxda, iyo nin jir ahaaneed oo ah masalan dhammaantood.
Midkoodna maskaxda ama neerfaha maskaxeedna waxaa lagu arki karaa clairvoyants. Jawiga ruuxi ahaaneed wuxuu noqon karaa, laakiin sida caadiga ah looma qabsan karo maskaxda, ama qofku dareemo, sababtoo ah maskaxda ayaa inta badan ka walwalsan waxyaallaha dareenka. Xitaa marka ruuxa la tixgeliyo, waxaa looga hadlaa dareenka, laakiin nin ruuxi ah iyo jawiga ruuxi ahi maahan dareenka ama hawlaha maskaxda. Xaaladda ruuxiga ahi badanaaba ma dareemo nin sababtoo ah jawiga maskaxdu waa mid aad u kacsan oo aan xasillooneyn in ragga aysan fahmi karin awoodda ruuxiga ah mana tarjumayaan joogitaankooda. Mid ka mid ah ayaa dareemi kara jawiga ruuxiisa by dareen ama sharaf leh in uu, "aniga," sii socon doona miyir la'aanta ah ha ahaato dhimasho. Sii waditaanka joogtada ah ee "I" waxay dareemi doontaa mid dhab ka badan dhimashada. Sababtoo ah jawiga maskaxeed, maskaxda qaladka ah oo khaldan waxay ka dhigaysaa dareenka joogtada ah ee "I", oo qiime u leh shakhsiyadda (taas oo ah, dareenka aniga iyo maaha fakarka aan ahay), oo leh rabitaan rabitaan ah in la sii wado. Marka maskaxdu ka fikirto jawiga ruuxi ah, dabeecadda ruuxiga ah waxaa loo qabtaa sidii nabadda, awoodda aamusnaanta iyo isdifaacsiinta. Xaaladda ruuxiintu waxay siisaa maskaxda, iimaan badan oo joogto ah oo ka soo jeeda wax kasta oo soo bandhigi kara oo laga yaabo inay soo bandhigaan caddayn dareen ama caqli ahaan. Sababtoo ah joogitaanka jawiga ruuxi ah, maskaxeedku wuxuu rumaysan yahay rumaysadka iyo xaqiijinta dhimashadiisa.
Qaybta maskaxda ah ee maskaxda ku jirta maaha waqti dheer in qofku ruuxi ahaan u arko marka jawiga ruuxi ahi uu ogaado joogitaankiisa, sababtoo ah jawiga ruuxi ahi waa mid aan loo baahnayn oo ka duwan jawiga nafsiga ah ee uu abuurayo cabsi, degan, awood iyo joogitaan , waa arrin qariib ah oo lagu fekerayo maskaxda aadanaha iyada oo aan cabsiin ama cabsi gelin. Sidaas darteed marka jawiga ruuxi isu-gooyo uu ogaado joogitaankiisa maskaxdu waa mid aad uga cabsaneysa inuu weli wali ogaado.
Dad tiro yar ayaa ku fekeray mawduuca dabiiciga ah sida dadka loo isticmaalo. Waxaa laga yaabaa in khilaafaadka iyo cilaaqaadka jira ee u dhaxeeya jidhka, maskaxda, maskaxda iyo ruuxa ruuxiga ah iyo astaamahooda asalkoodu aan la tixgelinin. Si kastaba ha noqotee, haddii maskaxdu ay ka welwelsan tahay mawduuca qulqulka iyo si sahlan u baaraya, beeraha cusub ayaa la furi doonaa, laydh cusub ayaa lagu tuuri doonaa habka ay saameyn ugu yeelan karto nin kale oo ku nool. Ardaygu wuxuu heli doonaa sababta uu isagu iyo dadka kale u leeyahay dabeecad kasta oo ka hor imaanaya iyo kuwo badan, iyo sida dabeecad kasta ee qof kasta uu u qabsado xukun ku-meel-gaar ah oo ficilkiisa ka dibna u sii siidaayo kan xigta. Haddii aan si cad loo fahmin astaamaha dadka, qofku si fiican uma fahmi doono dabeecadda jirka iyo sharciyada hoose ee xukuma dhacdo jireed, mana awoodi doono inuu helo, caqli ahaan, galo oo uu u dhaqmo mid ka mid ah adduunyada oo uu ayaa ku wareegsan. Wax yar ayaa loo yaqaan mawduuca qulqulaha, laakiin cidina maaha mid aan la garanaynin saamaynta uu qofku ku soo saari karo isaga iyo kuwa kale.
Haddii qofku keligiis fadhiyo oo magaciisa lagu dhawaaqo, magaca ayaa markiiba saameyn doona. Marka kale ee soo galo, saameyn kale ayaa la soo saaraa sababtoo ah jawiga jireed ee booqdaha wuxuu saameeyaa jawiga jireed ee qofka hela. Mid waliba si dhib leh ayuu u saameeyaa jawiga jireed ee kale, oo laga yaabo inuu ku fiicnaado ama aanu ahayn, sida ku cad midnimada ama ka hortagga dabeecadda qaybaha jidheed ee ka mid ah jawi kasta oo jirka ka kooban. Jirka jirka ee mid kasta wuxuu soo jiidan doonaa ama diidi doonaa kan kale; ama waxay noqon karaan kuwa ugu dhow iyaga oo u eg tayada inay iyagu soo jiidanayaan ama aysan soo jiidan doonin balse ay yihiin "guriga" shirkad kasta.
Waxyaabaha kale, si kastaba ha ahaatee, waxay isu soo rogaan. Waxay yihiin jawiga maskaxda ee mid kasta. Meelaha jimicsiga ee labaduba waxay ku heshiin karaan ama ka horjoogsan karaan midba midka kale. Heshiiskaas ama mucaaradka ayaa la xoojin doonaa ama la yarayn doonaa habka ay jimicsiga maskaxdu saameynayaan midba midka kale. Marka laga reebo rabitaanka si ku meelgaar ah oo firfircoon u leh mid kasta oo ka mid ah jimicsiga maskaxeed iyo dhinac ka soo jeedda booqashada, waxaa jira dabeecadda hoose iyo tayada qaaliga ah ee jawiga nafsiga ah ee mid waliba, taas oo saameyn doonta dabeecada asalka ah iyo jawiga maskaxda ee kale . Sidaas awgeed waa la kicin doonaa carqalado, caro, khiyaano, qadhaadh, nacayb, neceyb ama wax kasta oo ka mid ah dareenka, ama ficil ahaan, naxariis badan, naxariis leh dareen diiran, xamaasad ama jacayl. Saameynahan waxaa soo saarey waxqabadka mabda'a rabitaanka batoonka magnetic, jirka jireed. Jirka jireed wuxuu abuuraa aalado badan oo ka yimaada dhammaan qaybaha jidhka, laakiin gaar ahaan gacmaha iyo taaha. Ficiladani waxay noqonaysaa dabacsanaan ama ciriiri leh taasoo keenta jawi nafsi ah oo ka mid ah inuu u dhaqaaqo mowjado qulqulaya ama xoog leh oo soo galaya oo weeraraya ama isku dhafan kara jawiga nafsadda ee dhinaca kale. Haddii tani ay ku habboon tahay jawiga kale ee uu aqbalo, soo saaro oo ka jawaab celiyo saameynta iyo ficillada sida waafaqsan midka kale; haddii dabeecaddu ka soo horjeeddo jawiga maskaxeed ee nooca iyo tayada, dabeecadaha ayaa markaa ka hor dhici doona isla markaana u dhaqmi doona si la mid ah markii laba diyaaradood oo hawadu ay ku kulmaan; Duufaan waa natiijada.
Marka ugu dhaqsaha badan, ama ka dib kulankooda jimicsiga jirka iyo maskaxda, maskaxda maskaxda ee mid waliba isku muujiso, iyo sida ay awoodooda iyo awoodda ay u leeyihiin mid ka mid ah maskaxaha maskaxeed waxay saamayn doonaan oo ay xakamaynayaan jimicsiga jirka iyo maskaxda oo saameyn ku leh jawiga maskaxda ee kale. Haddii jawiga jireed iyo kuwa maskaxeedba ay isku raacsan yihiin, iyo haddii jawiga maskaxdu ay la kulmayaan, dabeecadda wanaagsani way fiicantahay, loona wada noolaado labada dhinacba. Laakiin jahwareer, dareen-xumo ama dagaal furan ayaa jiri doona iyada oo la raacayo khilaafka ka dhexeeya jimicsiga iyo maskaxda iyo maskaxda labadaba.
Haddii maskaxda mid ka mid ah uu si fiican u tababaran yahay oo uu leeyahay dabeecad maskaxeed oo si fiican loo xakameeyo, wuxuu awood u yeelanayaa inuu saameyn ku yeesho maskaxda oo uu xakameeyo jawiga nafsadda ee dhinaca kale. Hase yeeshee, haddii maskaxdu aanay ku sinnayn jawiga nafsadeed ee maskaxeed, ugu xoogga badan ee labada jimicsi ee maskaxda ah ayaa saameyn ku yeelan doonta oo ku hirgelin doona jimicsiga maskaxda iyo maskaxda ee dhinaca kale.
Haddii ganacsiyada taagan iyo jagooyinka bulshada iyo waxyaabaha dareemayaasha jirka ay yihiin waxyaabaha ugu daryeesha, markaa waxay saameyn ku yeelan doonaan qofka kale. Haddii uu yahay mid la yaab leh, naxariis badan oo si sahlan u dhaqaajiya dareenka iyo dareenka, wuxuu si weyn u saameeyaa jawiga nafsadda ee qofka cusub. Haddii uu u arko wax fiican ka hor intaan la fulin, haddii la siiyo baadhitaan falanqayn iyo cilmi-baaris, haddii uu miisaamayo awoodiisa maskaxeed ee uusan aheyn xiisaha uu soo saaro, ama sifooyinka jirka, markaa wuxuu noqon doonaa mid u nugul iyo saamayn ku yeeshay jawiga maskaxda ee dhinaca kale. Marka la eego qaab-nololeedka nooca maskaxda ee mid ka mid ah ayaa la kulmi doona isla markaana waafaqsan yahay kan kale iyo sida ay awooddeeda u saameyn karto ama u hogaamin karto dhinaca kale. Laakiin haddii mid ka mid ah jawiga maskaxdu uusan aheyn mid kale, markaas waxaa jiri doona mucaarad iyo muran, illaa mid ka mid ah labadooduba waxay la midoobi doonaan ama u soo bandhigi doonaan oo ay u hoggaansamayaan kan kale, haddii aysan ahayn labada maskaxeed oo ka duwan Caymadu waa in si siman loogu tiirsan yahay tayada, ama haddii jimicsiyada maskaxdu ay xoog ku filan tahay si ay uga hortagaan heshiiska oo waxay u keenaan in ay ku sii nagaadaan oo ka soo horjeedaan midba midka kale.
Maanka caadiga ah ma awoodo in uu si toos ah ugu dhaqmo jawiga maskaxda ee maskaxda maskaxda ee kale, sidaas darteed waxa uu u dhaqmaa ama u hoggaansamaa jawiga nafsaaniga ah si uu ugu dhaqmo jawiga maskaxda ee dhinaca kale. Maskaxdu waxay gaartay maskaxda oo waxay dhaqaajisaa jirka jireed, iyo rabitaan. Adigoo ficil maskaxda ku leh rabitaan iyo foom, carrabka iftiinka aan la arki karin waxaa loo diraa inta u dhaxeysa dhagaxyada iyo wejiga. Sidaa daraadeed, mid ka mid ah salaadaha, caqabadaha ama ducada, maskaxda qofka kale iyada oo loo marayo jawiga maskaxda; Maskaxdiisa wuxuu u dhaqmaa si la mid ah oo wuxuu aasaasay saldhigga wejiga; labadii xarumood ee ay sidaas sameeyeen waxay abuurtay farriin waxayna helaan farriimo iyada oo loo marayo jawi maskaxeed kasta Erayada waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiro ama la keeno saldhigyada isugeynta, laakiin sida ay awoodeeda u leedahay awood kasta oo maskaxeed ayaa saameyn ku yeelaneysa kalmadaha kale ee madaxbanaan.
Wixii jawiga jireed ee mid ka mid ah inuu saameeyo jawiga jireed ee kale, jirku waa inuu ku dhowaadaa. Haddii jawiga maskaxda ee mid ka mid ah ay tahay inuu saameyn ku yeesho mid kale, badanaa waa lagama maarmaanka u ah jir kasta oo jirka ah inuu arko ama maqlo midka kale. Jirka jirka ayaa sida caadiga ah loo baahan yahay sababtoo ah jawiga maskaxdu waxa uu u dhaqmaa wareegga iyo hareeraha. Marka laga reebo xaaladaha gaarka ah, midka qofka maskaxda ku haya ma ahan mid xoogan oo ku filan in uu ka fogaado masaafada dheer ee dhinaca maskaxda ee qof kale. Haddii mid ka mid ah jawiga maskaxeed uu ku xiran yahay kan kale, u dhawaanta jireed uma baahna inuu isaga saameeyo jawiga maskaxda ee kale. Fikraddiisa, qofku wuxuu isku xiraa maskaxdiisa maskax ahaaneed ee maskaxda. Iyada oo loo marayo jawiga maskaxda ayaa loo maleynayaa in lagu sababay ama lagu soo jeediyey mid kale.
Muuqaalka ruuxiga ah ee qofka soo galaya qolka waxaa laga yaabaa inuu noqdo, laakiin marmar waa, markiiba, oo maskaxda lagu arkaan. Waa wax aan caadi ahayn in jawiga ruuxi ee qofku uu ku filan yahay taabashada maskaxdiisa iyo dabeecadiisa maskaxeed si uu u dareemo ama uu dareemo mid kale. Hase yeeshee, waa suurtagal in jawigiisa ruuxi ah, xitaa inkastoo uusan taaban karin jawiga nafsadeed, waxaa laga yaabaa inuu awood u yeesho inuu sababo joogitaankiisa iyo in uu dareemo jimicsiga maskaxda iyo midka maskaxda ee kale, iyo in qof kale jawi ruuxi ah loo keeno oo la xidhiidha asxaabtiisa kale. Marka qofkasto ruuxi ah loo sheego, wuxuu u dhaqmaa si madaxbannaan awoodiisa sababtiisa iyo dabeecadiisa maskaxeed, wuxuuna soo saaraa deganaansho iyo nasasho, isla markaana wakhtigaas oo uu ruuxiisa ruuxi ahaaneed uu la xidhiidho iyo saameyn ku yeelan karo oo uu awood u yeelan karo maskaxdiisa iyo maskaxdiisa.
Dhammaan arrimahan waxaa laga yaabaa in la sameeyo ama la isticmaalo erayada, iyo inkasta oo dabeecadda ruuxiga ah ee labada nin aan la sheegin. Xaaladdan oo kale xoogga qarsoodiga ah iyo rumaysad iyo ujeedadu waxay ku sii jiri doonaan oo saameeynayaan midka saameeya saameeynta ka dib markii kale ee ka tageen. Haddii, si kastaba ha ahaatee, mawduuca ruuxa ruuxiga ah waa in lala hadlo oo qofkastaa ruuxi ruuxi ah uu xoog badan yahay waa inuu kiciyaa oo kiciyaa jaangooyaha kale ee mawduuca diinta ama qofka ruuxiga ah, ka dibna midkale Ujeedooyinka sida uu yahay qofka uu saameyn ku yeeshay. Laakiin ka dib markii saamayntaas laga saaray, iyo sida uu qabo awoodda maskaxeed ama maskaxeed ama maskaxeed iyo in la isku waafajiyo mid kasta oo kuwan ka mid ah kan kale, wuxuu u dhaqmi doonaa jawiga kan ugu xoogan. Haddii uu ruuxi ahaani uu ku dhaco asxaabtiisa kale, fikradaha la soo gudbiyay oo la aqbalay ayaa ku adkaan doona; Maskaxdiisu waa la aqbali doonaa, jawiga nafsadeedna waa la geli karaa. Laakiin haddii uu maskaxdiisa ku hareeraysan yahay atmospheres kale, inkasta oo fikradaha la aqbalo, waa la miisaami doonaa oo la qiyaasi doonaa lana maareyn doonaa maskaxdiisa. Tarjumaadda farsamooyinka ee awoodda ruuxiga ah ee lagu soo bandhigay ayaa ka xijaabi doonta niyadda maskaxdiisa ruuxiisa. Laakiin haddii uu maskaxdiisa uusan aheyn mid xoog leh oo aan doodi iyo macquul ah ku xidhnayn ruuxiisa oo ka soo jeeda jawiga nafsadda, markaa jawiga maskaxeed ayaa lagu kicin doonaa dareen diineed; dareenka ayaa xakamaynaya maskaxdiisa. Iftiinka ruuxiga ah ee loo soo gudbiyey isaga ayaa loo fasirayaa marka la eego dareenkiisa oo uu saameyn ku yeelan karo dadka kale oo uu iskood u doorto dareen diimeed iyo dareen diimeed.
Sababtoo ah farqiga u dhexeeya mid kasta oo ka mid ah aagagga aabaha waa ay adagtahay in laba nin iyo asxaabtooda ay isku dhexdhexaadiyaan, isku raacaan, ama ku noqdaan midba midka kale, haddii mid kasta oo ka mid ah jaangooyooyinka mid ka mid ah ragga ay isku mid yihiin kan kale, iyo haddii aan tayada iyo awooda ee jawi kasta loo hagaajiyo jawiga ku haboon ee kale. Sidaa daraadeed, isku dhac ayaa inta badan lagu sameeyaa ragga iyo cimiladooda.
Marka labadaba ay ku wada jiraan qol iyo wadaag, waxaa isku dhafan lagu sameeyaa inta u dhaxeysa aagagga. Soo galitaanka qof saddexaad ayaa si aan macquul ahayn u beddeli doona isku-darka. Qodobka cusubi wuxuu burburin doonaa heshiiskii oo wuxuu ku dhex tuuri karaa saxaarada labada dhinac, ama wuxuu soo saari doonaa waxyaabo badan oo isku dheelitiran, xakameynaya, la xiriiri doona, isla markaana keenaya heshiisyo ragga iyo cimilada. Muddo ka dib waxaa la isku daraa isku-dhafan cusub oo ka dhexeeya saddexda nin iyo astaamahooda. Soo galitaanka ka dambeeya afartii iyo shanaadba waxay soo saari doonaan isbedel iyo kala duwanaansho iyo isu-geyn cusub oo udhaxeeya atmooyinka iyada oo wax kasta oo cusub lagu soo bandhigo. Si la mid ah, isku-dhafka atmospheres oo ay sameeyeen by tiro tiro ah oo rag ah ayaa la beddeli doonaa oo cusub cusub sameeyey sida mid kasta oo ka tago qolka. Dabeecadda jawiga guud ayaa lagu go'aamiyaa tayada iyo awooda mid kasta oo ka mid ah atmospheres ee mid kasta oo ka mid ah ragga.
Iyadoo ay joogaan hal ama tiro badan oo rag ah qol iyo guri ayaa siiyay jawi taas oo caan u ah fekerka iyo rabitaanka kuwa ku nool ama ku noolaa ama u jiifsaday. Dabeecaddani waxay gogol-xaareysaa qolka ama guriga intaa ka dib marka ay ka baxdo dadka ay ku nool yihiin sida xoogga fekerkooda iyo rabitaankooda; waxaa laga yaabaa in la dareemo ama la dareemo mid ku soo gala qolka ama guriga.
Goob kasta oo ay dadku isugu yimaadaan waxay leeyihiin jawi gaar ah, nooca ama dabeecadda taas oo lagu go'aamiyo fikradaha, rabitaanka iyo ficilada dadka. Tiyaatarada, dukaamada khamriga iyo isbitaallada, xabsiyada, kaniisadaha, qolalka xafiisyada iyo dhammaan xarumaha dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay, dhammaantood waxay leeyihiin astaamo dabeecadeed, oo qof kastaa dareemi karo. Kuwa ugu macquulsan oo qosol badani maaha kuwo ka difaacaya saameynta cimilooyinkan, laakiin waxay dareemi doonaan ama ay dareemayaan inay si aad ah u danaynayaan kuwa dareenka ugu nugul oo toosiya.
Tuulo, magaalo, magaalo weyn, waxay leedahay jawi qaas ah. Dadku waxay u arkaan ama dareemayaan dabeecadeeda inay ka fogaadaan ama tagaan meeshaas iyada oo ay ku xiran tahay goobaha meeshaas ka soo baxa ay saameyn ku yeelato saameynta dadka deegaanka. Mid ayaa lagu riyaaqi doonaa farqiga u dhexeeya aagagga dagaalka, kubbadda dhulka, tartanka tartanka, goobta xerada, ama qabriga. Shucuurtiisa waxaa soo bandhigay aragtidooda astaamahooda kala duwan.
Meelaha ay dadku ku badan yihiin maahan meelaha kaliya ee leh dabeecado muuqaal ah. Meelaha ay cagaha ku yartahay ninkani mid waliba waxay leedahay cimilo qaas ah. Mid ka mid ah oo ku safraya kaymaha waaweyn, baaxad ballaadhan, lamadegyada daadadka ah, buuraha buuraha lagu rido, ama ku dhaadhacay miinooyinka, godad galay, ama raadiyo dhulka hoostiisa, waxay ogaan doonaan in meel kasta oo caynkaas ahi ay gaabisaan waxay ku hareereysaa saameyn ku yeelashada dabeecadda taas oo aan la dabooli karin. Saameyntani waxaa lagu wargaliyaa jawiga ninka ee jawiga degaanka.
Qaran kasta ama waddan kasta wuxuu leeyahay jawi u gaar ah, taas oo ka duwanaata dalalka kale iyo waddamada kale. Jarmal, Faransiis, Ingriis, Hindi, Chinaman, ama Carab, way ka duwan yihiin kan kale. Marka nin dhalasho ahaan u tago waddan kale, wuxuu la qaadaa jawi qaas u ah waddanka uu ku dhashay oo la nadiifiyey. Dabeecaddiisa waxaa la dareemi doonaa dadka quruunta iyaga oo ka duwan kan iyaga ka duwan. Tani waxay muujineysaa farqiga udhaxeeya jawiga dalkiisa, taas oo calaamad u ah shakhsiyaddiisa ay saameyneyso jawiga qaranka.
Ruushka qaranku wuxuu isu muujiyaa jawiga. Rabshadan qaran ama cimilada ayaa soo jiitay ilamaha aan dhalan, iyo dhalashada ka dib, jawiga dalkiisa waa uu ku faraxsan yahay loona shaqeeyaa cunuga iyo dhalinyarada, waxaana loo arkaa inuu yahay caadooyin iyo caadooyin iyo nacayb, sida uu u yahay saldhigga nolosha iyo qaabka taranka. Ilmuhu wuxuu qaadaa oo wuxuu ku gedisan yahay shakhsiyaadka shisheeye ee u gaar ah jawiga qaranka. Waxyaabahan ama xayeysiinta ama midabaynta qaranka ee jawiga kasta shakhsi ahaaneed waxa uu u muujiyay "wadaniyad," waxaana laga yaabaa in loo arko waxa loo yaqaan "habka qaranka iyo rabitaanka xitaa, oo laga yaabo inuu xitaa samayn karo, saameyn ku yeesho fikirkiisa.
Mawqifka waddanku wuxuu saameeyaa kuwa ku dhashay iyo kuwa ku dhex nool. Sida uu qabo awoodda iyo awooda ruuxiisa maskaxeed iyo maskaxeed iyo maskax ahaanba wuxuu saameyn ku yeelan doonaa jaangooyooyinka waddanka uu ku nool yahay. Wuxuu soo jiidan doonaa ama soo jiidan doonaa aagagga waddanka, sida uu qabo xiriirka jira ee u dhaxeeya jardiintiisa iyo dabeecadda ama ujeedada iyaga ku leh.
Maskaxda ayaa inta badan ku dhacda wadan qaran oo jawigiisu aad ugu wanaagsan yahay. Laakiin marar badan ayaa dhacda in maskaxdu ku dhacdo meesha jawiga qaranka uu ka duwan yahay kan isaga u gaar ah. Tani waxay sabab u tahay sababaha karmic, taas oo noqon karta dabeecad adag. Hase yeeshee, mid ka mid ah kuwa aadka u dhinta ah ayaa aad u dhali doona inuu ka tago dalka oo uu doorto mid kale kaas oo noqon doona mid la aqbali karo jawiga awooda leh.
Mid ayaa laga yaabaa inuu wax badan barto dabeecada mid kasta oo ka mid ah jaangooyooyinka isagoo ogaanaya sida iyo qaybta uu ka kooban yahay uu saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dadka uu la kulmo, iyo sida ficiladiisa iyo ereyadiisa iyo jiritaanka saameyn ku yeeshaan kuwa kale. Isagu waa inuusan sidan u sameynin riyooyin aan fiicnayn ama jacaylka tijaabada ah, laakiin si uu u barto sida ugu wanaagsan ee adduunka loogu isticmaalo shaqadiisa adduunka. Waa inuusan dadka kale ku dhicin "imtixaano," mana isku dayaan inay ogaadaan waxa ay ka qarinayaan ogeysiiskiisa. Haddii uu isku dayayo in uu wax yeelo dadka kale iyada oo ay ku jiraan astaamahaas oo kale wax horumar ah kama sameyn doono waxbarashadiisa, hase yeeshee wuxuu noqon doonaa daruuf iyo isfahamkiisa jawiga maskaxeed iyo waxa uu isku dayey in ay ka jawaabi doonaan oo ay isku dari doonaan oo ay saameyn doonaan isaga jawiga nafsaddiisa.
Mid ka mid ah kuwa u nugul saameynta iyo awood uma laha inay xakameyn karaan waa inay ka fogaadaan dad badan oo ay ku faraxsan yihiin oo ay ka fogaanayaan ciyaalka, sababtoo ah jawiga cimiladu waa ay kufilantahay dabacsanaan iyo rabitaan, kaas oo ku kicin doona ciidankan nafsaddiisa nafsadeed iyo wuxuu u horseedi karaa inuu sameeyo tallaabooyin ah inuu ku qoslayo daqiiqado miyir-qab ah, ama jawiga hawadu wuxuu u keeni karaa inuu dhaawaco sababtoo ah ma uusan dhalin oo u dhaqmid sida ay u jajaban tahay taas oo xakameyneysa xanuunka.
Nidaamka daraasadda ee jimicsiga waa in uu ahaado nin si uu u barto aqoontiisa gaarka ah, iyo in uu jaangooyuhu u keeno xiriirkooda habboon ee xidhiidhka; inuu ogaado farqiga u dhexeeya hoose iyo sare; in uu kor u qaado sareeya kan sare; oo mid kastaaba wuxuu u talin doonaa dunida.
Ninku wuxuu leeyahay xitaa iyo horumarka guud ee horumarka iyo in si siman loola socdo mid kasta oo ka mid ah jaangooyooyinka waa in ay u dhaqmaan oo dhammaantood wada shaqeeyaan si wada jir ah. Maanka maskaxiyan waa in uu ka taxadaraa mid kasta oo ka mid ah jaangooyooyinka oo ka shaqeeya iyaga oo u maraya si macquul ah. Si arrintan loo sameeyo, ficil waa lagama maarmaan. Jawiga jireed ayaa saameeya ficil jirka ah, jawiga nafsiga ah ee rabitaanka, maskaxda maskaxda ee fikirka, iyo jawiga ruuxi ahaaneed ee iimaanka uu qofku og yahay.
Mid ka mid ah jaangooyooyinka si loo wada keeno midba midka kale, waa in uu jiro mid isku mid ah ama mid isku mid ah tallaabo kasta. Waa inay jirtaa tallaabooyin noocaas oo kale ah oo soo kicin doona mid kasta oo ka mid ah hoolalka iyo sida uu ugu yeeri lahaa aqoonta ama iftiinka ku saabsan dhammaan. Hadalka jirka ama ereyada lagu hadlo waxay ku dhaqmi doonaan jawiga jireed, rabitaanku wuxuu ku dhaqaaqi doonaa erayada oo uu ku dhaqaaqi doonaa jawiga jawiga maskaxeed, fikirku wuxuu siin doonaa jihada rabitaanka iyo wacitaanka ficilka maskaxda maskaxda, iyo iimaanka aqoonta dhammaanteed waxay la xiriiri doonaan ruuxa ruuxiga ah ee xaafadaha kale.
Racfaanka iyo yeedhidda qofka ugu sareeya waxaa laga yaabaa in sidaas lagu sameeyo ereyga uu ku hadlo, isagoo si qoto dheer u doonaya inuu ogaado, isagoo ka fakaraya macnaha iyo rumaysad qoto dheer oo ku saabsan joogitaanka ruuxa ruuxiga ah ee loo yeerayo.
Sida muraayadda oo dhex maraysa mid kasta oo ka mid ah jaangooyooyinka iyo isku xirnaanta nin jireed, waxaa jira wax kasta oo la xidhiidha dhinaca kale iyo habka maskaxda ee jidhkeeda jirkiisa uu ogaan karo mid kasta oo ka mid ah jardiinooyinkeeda oo isku hagaajiyo xiriirka saxda ah ee jawiga kasta. Tani waa wax aan la hubin; waa macquul. Maskaxda ku jirta jidhka jirku waa hal dhinac oo ka mid ah nalka; shakhsiga kale ee "waxaan ahay" waa kan kale. In maskaxda ku jirta maskaxdu waxay u muuqataa inaysan jirin wax kale oo kama dambayn ah marka loo eego taas; ama haddii kale, haddii ay u maleeyaan in ay jirto dhamaystir ruuxi ah, ma tixgelin doono sida ugu dambaysa ee loo gaadho. Dhamaadka jirka ku jiraa waxay gaari karaan dhammaadka ruuxiga. Sida loo gaaro oo loo midoobo dhammaadka dariiqa waxaa loo adeegsadaa feker ahaan. Feker ma aha jidka, laakiin fikirku wuxuu sameeyaa ama diyaariyaa jidka. Jidka waa xalka. Fikradda waxay ku socotaa mareegtan, waxayna ogaataa oo ay dhiirrigelisaa. Cirbadda lafteedu waa midka miyir-beelka ah oo dhan. Markaad ka fikirto waa bilowgii; Maankaaga waa furitaanka jidka. Iyagoo sii wadaya in ay ka fekeraan oo ay sii wataan mabda'a miyir-qabka ah, maskaxeedku wuxuu noqdaa mid miyir-beel ah oo uu miyirkiisu saran yahay dhamaadka kale ee mabda'a miyir-qabka ah, iyo inta uu socdo dadaal joogto ah wuxuu noqonayaa mid.